Nicodemus - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာချီဘုရားရှိခိုးကျောင်း
ဆောင်းပါး > အသက်တာ၏စကားပြောသော > နိကောဒင်ကားအဘယ်သူနည်း
ယေရှုသည်မိမိ၏မြေကြီးအသက်တာတွင်အရေးကြီးသောလူများစွာ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ မှတ်မိဖွယ်ရှိသောထိုသူတို့ထဲမှတစ် ဦး မှာနိကောဒင်ဖြစ်သည်။ သူသည်ကောင်စီ ၀ င်များ၊ ရောမများနှင့်အတူယေရှုကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်တင်ခဲ့သည်။ နိကောဒင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်နှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ ၎င်းမှာသူ့ကိုလုံးဝပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ သူသည်ယေရှုနှင့် ဦး ဆုံးတွေ့ဆုံချိန်တွင်ညသည်ဖြစ်သင့်သည်ဟုအခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်? အကြောင်းမှာသူသည်ကောင်စီဝင်များနှင့်အလွန်ဆန့်ကျင်သောသွန်သင်ချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်သောအမျိုးသားတစ် ဦး နှင့်သူတွေ့ခဲ့လျှင်သူဆုံးရှုံးရလိမ့်မည်။ သူနှင့်သူတွေ့ခံရရန်ရှက်ခဲ့သည်
ခဏကြာတော့ Nicodemus ကိုတွေ့တယ်၊ သူဟာညပိုင်းညမှာ visit ည့်သည်နဲ့လုံးဝကွဲပြားတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာကသူသည်ယေရှုအားကောင်စီကောင်စီများထံမှခုခံကာကွယ်ရုံတင်မကပိလတ်အားယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလွှဲအပ်ရန်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတောင်းဆိုခဲ့သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး လည်းဖြစ်သည်ဟုဆိုထားသည်။ ခရစ်တော်နှင့်မတွေ့ဆုံမီနှင့်ပြီးနောက်နိကောဒင်အကြားခြားနားချက်သည်နေ့နှင့်ညအကြားခြားနားသည်။ ဘာကထူးခြားတာလဲ ကောင်းပြီ၊ ငါတို့နှင့်ယေရှုနှင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွင်အတူတူပင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်
နိကောဒင်ကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့အများအပြားသည် ဝိညာဉ်ရေးသုခအတွက် မိမိကိုယ်ကိုသာ ယုံကြည်ကြသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ နိကောဒင်ကို အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့အတိုင်း၊ ငါတို့က အဲဒါနဲ့ သိပ်ပြီးမအောင်မြင်ဘူး။ ကျဆုံးသွားသူများအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို ကယ်တင်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။ ဒါပေမယ့် မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်။ ယေရှုဤသို့ရှင်းပြခဲ့သည်– “လောကီသားတို့ကို တရားစီရင်ခြင်းငှာ ဘုရားသခင်သည် သားတော်ကို ဤလောကသို့စေလွှတ်တော်မမူ၊ ယုံကြည်သောသူမည်သည်ကား အပြစ်စီရင်ခြင်းသို့ မရောက်။” (ယော 3,17-18) ။
နိကောဒင်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိကျွမ်းပြီး ထာဝရအသက်ရရန် သူ့အားကိုးစားပြီးနောက်၊ ယခုအခါတွင် သူသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် အညစ်အကြေးကင်းစင်ပြီး သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာရပ်တည်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သူသိခဲ့သည်။ ရှက်စရာ ဘာမှ မရှိခဲ့ပါ။ သခင်ယေရှုက သူ့အား ဤသို့ကြေညာခဲ့သည်– “အမှန်တရားကို ကျင့်သောသူမူကား၊ ဘုရားသခင်၌ မိမိပြုသောအမှုတို့ကို ထင်ရှားစေခြင်းငှာ အလင်းသို့ လာတတ်၏။” (ယော. 3,21).